nezinye | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngubani "uOscar", okanye imbali yestatu esaziwayo
Imifanekiso eqingqiweyo ka-Oscar inembali etyebileyo ezaliswe ngamabali namarhe. Phambi kwakho - ibali eliphikisayo nelimangalisayo lamabhaso edumileyo kwifilimu. Ibhaso lokuqala embalini lingaya kwinja.
Iinkcukacha ze-13 usenokungazi malunga neziMfama
Wonke umntu ubuncinci kube kanye ebomini bakhe wajongana neemeko zokunyanzelwa ezinxulumene nelahleko yexeshana yokubona. Oku kubangelwa zizinto kunye nokucinywa kombane. Khawufane ucinge ukuba kukho inkanyamba kwindawo yakho ...
Ngaba kukho i-moby dick yangempela?
Ewe, isigebenga, igazi kunye nomnenga wonke omhlophe uMoby Dick ovela kwinoveli kaHerman Melville yayiyintsomi eyintsomi yothando lokugqibela lwaseMelika. Nangona kunjalo, njengesiqhelo, ubunyani baba lukhuthazo lwentsomi. Fiction okanye ...
Kutheni ikhofi inokubangela isisu esicasulayo?
Abantu bahlala bethetha ngendlela abangaphili ngayo ngaphandle kwendebe yabo yekofu kusasa. Nangona kunjalo, akukho namnye othi le ndebe yekofu inye ayivusi wena wedwa, ...
Ngaba yinyani ukuba akukho kwanto ebomini eyenzeka ngoluhlobo?
Ingqondo yomntu inokwamkela nantoni na ngaphandle kwentlekele. Akukho mntu unokukhokelela kubomi obungalungelelananga ngokupheleleyo obuzele sisiphithiphithi. Ewe, igumbi lomntwana ofikisayo linokujongeka lilihle ...
I-10 iimpawu zokuqala zengqondo
Isifo sengqondo esixhalabisayo singaphezulu kokulahleka kwememori elula. Ke usibona njani esi sifo kwangexesha? Yintoni isifo sengqondo esixhalabisayo? Ngapha koko, ayisosifo. Singatsho ukuba le ...
Intsha yaseMelika "isitshabalalisi": amandla kunye nobuthathaka
ezaposwa ngomhla 05.09.2019
Ijongeka ngathi yintsimbi kwaye ijongeka ingaqhelekanga kunokoyikisa, kodwa abakhi beenqanawa zeGeneral Dynamics inkampani, eyenze iBath Iron Works eMaine, lo ngummangaliso wetekhnoloji, baqinisekisa ...
Iindaba ze-6 ze-Creepy Ghost Ship
ezaposwa ngomhla 22.08.2019
Wonke umntu uvile ngenqanawa ebizwa ngokuba yiFlying Dutchman, eyona nqanawa idumileyo emhlabeni. Nangona kunjalo, ikukude kuphela. Umphefumlo wenqanawa eyakhe yatshona ngumxholo othandwayo, ...
Izikhonkwane ezide kakhulu emhlabeni: irekhodi elitsha leGuinness
ezaposwa ngomhla 16.08.2019
Indoda yaseIndiya yangena kwiGuinness Book of Records ngaphandle kokwenza nantoni na. Khange atye ubuninzi bezinja ezishushu, akazange atsibe eluphahleni lwesakhiwo. Konke oko ...
Indlela yokukhulisa umntwana ozithembayo: iingcebiso ze-12 kubazali
ezaposwa ngomhla 07.08.2019
Ukuzithemba sesinye sezona zipho zinkulu abazali abanokuzinika abantwana babo. Ke ngoko, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kulo mbandela. Ngokutsho kwengqondo, ukungazithembi ngokwaneleyo ...
UBheethoven wenza ntoni xa elahlekelwa ukuva kwakhe
ezaposwa ngomhla 02.08.2019
Wazalwa kwiminyaka engama-245 eyadlulayo, kodwa intlekele yokuphulukana nendlebe isabachaphazela abathandi bomculo. Imfihlelo yokuzalwa kukaBeethoven Nokuba kwiinkulungwane kamva, kukho enye imfihlo enkulu ngobomi bukaLudwig ...
I-6 izigcawu ezivela kwiimovie zidutshulwa ngabadlali abanxilayo
ezaposwa ngomhla 27.07.2019
Akukho ngqiqweni ukukholelwa ukuba ukuba umdlali weqonga kumdlalo bhanyabhanya udlala umntu onxilileyo, ubesele ngaphambi kokuba awuthathe. Umsebenzi wobugcisa obubambekayo uqinisekisa abaphulaphuli ukuba phambi kwabo umntu wegazi onxaniweyo, okanye ...
Iimpawu ze-10 ezimangalisayo malunga namahlengethwa
ezaposwa ngomhla 18.07.2019
Bobabini abadala kunye nabantwana bayazithanda ihlengethwa. Ezi zilwanyana zincancisayo zibonakala zinengqiqo emangalisayo, kwaye ukunxibelelana nazo kunesiphumo sonyango! Funda iinyani ezilishumi ezinomdla ngazo. Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-XNUMX zehlengethwa iDolphins ...
Ileta umama oneminyaka eyi-10 nyana. Yifunde kumntwana wakho!
ezaposwa ngomhla 16.07.2019
Le yileta wonke umama angathanda ukuyibhala, ongakwaziyo ukucacisa ngamagama iinyaniso ezikrakra. Kodwa kufuneka ziboniswe ngamanye amaxesha, kwaye zibhetele emva kwexesha kunangaphambili. Kutheni konke kwaqala? Namhlanje…
I-4 ngumqondiso wabantu abakhohlisayo abonakala babalungile kuwe
ezaposwa ngomhla 08.07.2019
Ngamanye amaxesha asibaqondi abantu abasingqongileyo kwaye sizama konke okusemandleni ukubakhathalela, nangona singafumani mbuyekezo inye. Kukho amaxesha apho sibona ezo zinto kwi ...
I-Smart application ikuvumela ukuba ulinganise izinto kwi-iPhone 6
ezaposwa ngomhla 01.07.2019
U-Apple uvelise itekhnoloji ye-3D yeTouch yokunxibelelana ngakumbi nefowuni kunye nomnini. Nangona kunjalo, ekunikezelweni kwe-iPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus akukho lizwi lithethiweyo ...
Ungasusa njani isitaki kwimoto?
ezaposwa ngomhla 26.06.2019
Abaqhubi abaninzi babeka izitikha ezimotweni zabo ezinokufuzisela nantoni na. Ngamanye amaxesha ezi zincamathelisi zivela ngqo kumenzi, kodwa kuyo nayiphi na imeko, unokuyithanda into enje ...
Iimpawu ze-25 ezimangalisayo malunga needube
ezaposwa ngomhla 22.06.2019
Amaqwarhashe aphakathi kwezidalwa ezintle ezihlala eAfrika. Abantu bayayazi imivumbo yabo edumileyo emzimbeni kwaye abanako ukusombulula umbuzo nangayiphi na indlela: ngaba bamhlophe ngemivumbo emnyama, okanye ngaba ...
Ukutyalwa "Antonov", okanye Ukuphela koshishino moya Ukrainian
ezaposwa ngomhla 21.06.2019
Ummiselo waseburhulumenteni kaJanuwari 26 uvumile ukuba kupheliswe inkxalabo yokwakha iinqwelomoya eAntonov. Olu xwebhu lenze uxinzelelo kubemi abaninzi baseUkraine nakwindawo yonke yasemva kweSoviet, ngaphandle kwengcaciso ezininzi ezithi ...
Kutheni amahle amantombazana engatshatanga: Izizathu ze-5
ezaposwa ngomhla 20.06.2019
Kukho izimvo ezingapheliyo malunga nokuba kutheni amantombazana azimeleyo, aphumeleleyo kwaye entle emaninzi kunesiqhelo. Njengoninzi lweemfihlelo ebomini bethu, akukho mpendulo inye kule nokuba yeyiphi. Ngamaxesha amaninzi ...
Page 1 Page 2 ... Page 908 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-80 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,744.